Pedilanthus: izici zokunakekela ekhaya, izinhlobo zezitshalo nezithombe - Ukukhiqiza ukukhiqiza - 2020
I-Devil's Spine noma i-Pedilanthus - i-succulent eyingqayizivele
Muva nje, uye wathandwa ukuhlobisa amakamelo anezimbali ezingavamile ezingavamile. Izitshalo zakha induduzo ekhethekile endlini, zisekela ingaphakathi, futhi zihlanze umoya.
Emahhovisi ahlaziya umkhathi wansuku zonke evamile ngezinhlayiya zemvelo, i-aesthetics. Phakathi kwezitshalo ezihlukahlukene, ukunakwa okukhethekile kuyakujabulela Perennial Pedilanthus.
Lesi sihloko esingezansi sichaza isitshalo sangaphakathi. flower pedilanthus, izinhlobo zayo ezidumile ziyi-titimoid, ezinkulu-fruited nabanye, kanye nokunakekelwa kwekhaya okunomsoco nesithombe.
Pedilanthus - ezithakazelisayo, ezingavamile, isitshalo esiyingqayizivele esithandwa ngabalimi abaningi.
Iqukethe izimfanelo eziphezulu zokuhlobisa, ngakho-ke kuyoba ngaphezu kwanoma iyiphi indawo yangaphakathi yesimanje noma yehhovisi. Imbali engapheli, ngakho-ke ngokunakekelwa kahle isikhathi eside kuyokhula futhi ikujabulise ngobuhle bayo.
Izindawo ze-pedilanthus zisezindaweni eziphansiezishisayo Izindawo zase-US, kanye nezinye izindawo zaseMexico.
Endaweni yemvelo, kubonakala sengathi ubude, i-shrub ephakeme kuze kufike kumamitha amabili. Esimweni sasekhaya sinesisindo esingaphezu komthamo kanye namaqabunga.
Pedilanthus imelela i-shrub yokuhlobisa izimbaliengomndeni we-euphorbia (Euphorbiaceae).
Igama layo livela eGrisi kusukela emabhantshi amagama ("pedilon") kanye nembali "anthos".
Amahlamvu ahlaza okwesibhakabhaka (omnyama noma okukhanya), wavy. Kungenzeka ukuthi uhlala phansi noma ufushane, okunye, kuze kufike ku-8-10 cm ubude, bushelelezi noma buke kancane.
Isiqu sino-cylindrical, greyish noma eluhlaza okombala.
Izimbali zakhiwa nge-inflorescences ezinama-apical ezinamahlombe amabili abomvu, amancane, aqoshiwe.cishe u-2 cm ububanzi. I-Inflorescences i-pink noma ibomvu. Bafana nezinhloko zezinyoni ezincane noma izicathulo.
Emvelweni, kunezinhlobo ezingu-15 ezihlukahlukene. Okuvame kakhulu ekamelweni lesikhungo kukhona:
I-Pedilanthus enkulu-fruited (i-macrocarpus benth.).
Isikhathi esingenamkhawulo esihlahla samahlathi esihlahla esiphundu. Amaqabunga ayancipha ngesimo se-flakes. Motherland - Sonora. Iqukethe ama-stalk-gray-stalks agcina amanzi emanzini owomile.
Ingxenye yeziqu ingashintsha ekubukeni okubheka phansi. Izimbali ezikhanyisa, ezibomvu noma ze-orange.
I-Pedylanthus titimaloid (i-tithymaloides (L.) Poit.).
Kubantu ngokuvamile ubizwa ngokuthi "i-devil's ridge" yesici esingavamile sesitshalo, esishintsha isiqondiso saso uma kuvela amaqabunga amasha. It ikhula kuya 60-80 cm.
I-branched, i-shrub ene-thickened. nge-stroke epholile, enamahloni, egobile kanye namagqabunga aphukile ahlukile embala: ohlaza okwesibhakabhaka, onemiphetho eluhlaza, i-pink hue.
Umbala uncike ezimweni zokuhlala. Ama-inflorescences abomvu. I-Subspecies ssp. smalii. Uhluke ngaphezulu kwesigwegwe, i-zigzag stalk.
Ivuliwe amaqabunga ahlaza, aluhlaza, amakhulu. Izitshalo zigxilile, zimile ezikhanyayo. Endaweni yokuhlala, ejwayelekile emahlathini emvula aseTroatia e-United States. Ikhetha inhlabathi elula, ephefumula.
Ukubuka komuthi ovamile. I-shrub ephakeme kakhulu ehlala njalo kunamapremu amathathu ukuphakama. Iziqu ziluhlaza, zimnyama, zihlanganisa. Amaqabunga ayesigcwele, akhonjiswe, ngamaphethelo we-wavy, kuze kufike ku-5-6 cm ubude.
Ezimweni zesimo sezulu ezipholile, zingalahla amaqabunga amancane. Kwenzeka okufanayo nokugcinwa kwezindlu okungalungile.
UPedilanthus ufuna ukunakekelwa, ukunakekelwa nokunakekelwa.
Ngesikhathi esifanayo, ukumnakekela ekhaya akuyona neze nzima futhi ngisho oqalayo uzokwazi ukubhekana nalo msebenzi.
Abaningi abalimi bembali abakhokhi ukunakekelwa okwanele ukunakekelwa emva kokuthenga, emva kwalokho ubhekane nezinkinga ezahlukene.
Ekuqaleni, i-pedilanthus kumele ifakwe kwesinye isitsha.
Isitolo se-flower pedilanthus sigcinwa ngezimbiza zesikhashana, ezisetshenziselwa ukukhuphuka kakhulu.
Akufanelekile ukugcinwa unomphela.
Umhlaba kufanele ube obala, unomsoco, ukuqinisekisa ukugeleza komoya okwanele nomswakama ohlelweni lwempande. Amanzi akufanele agxumeke ukuze angaqhubeki ukuthuthukiswa kwezimpande.
Indlela engcono kakhulu ukuthenga ingxube eyenziwe ngomumo we-succulents kanye ne-cacti.
Kungenzeka ukuthi ulungise ingxube yomhlabathi ngokuzimela ngokusanhlamvu kanye nomhlaba oqhekekileyo ngokulinganayo, izitini zezitini, isanti.
Amandla alungiselelwe usayizi wesistimu yempande. noma okungaphezulu kunalokho. Imbali inezimpande ezincane. Kungcono ukhethe izimbiza zobumba. Lezi zinto zinobungane kakhulu emvelo.
Isiqukathi kumele sibe nomgodi ngezansi. Ngaphansi kwe-drainage yokugcwalisa impela.
Ukutshala kabusha kufanele kwenziwe entwasahlobo efudumele. emva kokuvela kwamaqabunga amancane. Ukukhipha - ukufakelwa ngokushesha emva kokuthenga. Awudingi ukufakelwa okufakwe njalo. Kuyenzeka lapho izimpande ziqala ukugcwalisa ivolumu egcwele ebhodweni.
Ngemuva kokuguqulwa kwe-pedilanthus kunconywa ukuba ufake endaweni emnyama. Lokhu kuzokusiza ukuvumelanisa ngokushesha nokuphumula.
Ehlobo nasentwasahlobo, i-flower is fertilized 1 isikhathi ezinsukwini ezingu-30. Kungcono ukusebenzisa ukugqoka okhethekile kumnandi kanye ne-cacti. Ngesikhathi sokuphumula ayinakudliwa.
Umquba kufanele ube i-nitrogen mahhala. Kuyinto engafanele kakhulu impilo yesitshalo.
Okuthandwa kakhulu emakamelweni ahlelwe kahle ngamafasitela avulekile, aqhakazile.
Lesi sitshalo sizokhululeka kakhulu emafasiteleni amafasitela abheke eningizimu-mpumalanga, eningizimu-ntshonalanga, nasempumalanga.
Uma ibhodlela lingaseningizimu, qaphela ukudala ukukhanya okukhulu. Ilanga eliqondile liyingozi embali futhi lingabangela ukushisa.
Ukuhamba kwesikhathi ekwindla nasebusika ngenxa yokungabi khona kwelanga ukukhanya okungeziwe okwenziwe okuphakanyisiwe.
Igumbi kufanele libe lokushisa okulinganisiwe: ehlobo cishe ngama-20-24 degrees, futhi ebusika alikho ngaphezu kuka-14-16.
Imvamisa kaningi emoyeni, thatha ibhodlela emoyeni ovulekile, ukuze iphefumule futhi ivuselele elangeni.
Vikela kusuka kumashilo ebusika nokushisa okungavamile.
U-Pedilanthus akathandi ukushisa kwekamelo eliphakeme nomoya owomile kakhulu.. Kungagula, amaqabunga aqala ukuwa, kanti isitshalo sifana phambili.
Entwasahlobo nasehlobo i-pedilanthus zidinga ukuchichimakodwa hhayi ukuchelela njalo.
Inhlabathi kufanele isomile ngokuphelele ngaphambi komswakama olandelayo. Ebusika, lesi sitshalo siphuziswa ngokweqile (cishe kanye namaviki angu-1-1.5).
Ukuntuleka komswakama kungabonisa ukuyeka amaqabunga noma ukuchitha.
Ukunisela, amanzi kuphela aluhlaza okwesibhakabhaka ekushiseni kwekamelo afanelekile.
Esikhathini esishisayo, ukuchelela kufanele kwandiswe.
Lesi sitshalo sihambisana kahle nokuhlala ezindlini. Umoya kumele ube owomile ngokulinganisela..
Ehlobo, kunconywa ukuba amanzi aphefwe asetshenziswe njengeprophylaxis yokwehla nokuphuza amaqabunga.
Ebusika, ungafaki imbiza eduze namadivayisi okushisa..
Abanye abatshali bafaka ibhodlela egumbini elinamahlumela amanzi noma bafaka isitsha ngamanzi eduze kwalo ukuze kukhishwe okwengeziwe (uma kudingekile).
Uzala kanjani ekhaya? UPedilanthus usakazwa kalula yi-cuttings.
Imbewu encane kaningi, ngoba lo msebenzi unzima, kudinga isikhathi esiningi nomzamo.
Ukukhiqizwa kwe-cuttings kunconywa ukuba kwenziwe kanje: iziqongonga zamahlumela (8 cm ubude) zinqunywe i-pedilantus futhi zomisiwe ekamelweni lokushisa izinsuku ezingu-1-2.
Umsuka esihlabathini esomile ekushiseni kwama-22-24 degrees. Ngaphambi kokutshala, i-cuttings iyatshiswa ngesihlabathi. Ukumboza imbiza ngeglasi akudingekile, ukuze ungabhubhisi ukubukeka kokubola.
Kungagxila emanzini afudumele abilisiwengokufaka esikhundleni sendawo esisha.
Ngemuva kokuqothulwa kwe-rooting batshalwe endaweni entsha.
Ukuqhakaza kukaPedilanthus kwenzeka ekupheleni kwekwindla nokuqala kwasebusika.
Phakathi nalesi sikhathi, kunconywa ukwandisa imvamisa yokunisela futhi ungashintshi indawo yombhodwe.
UPedilanthus ayidingi ukusika izihlahla njalo ngokukhula okuhle nokuthuthukiswa.
Abanye abatshali balima isitshalo emva kokufakelwa kabusha ukuze bandise ukuhlanganisa.
Ingxenye yesithathu yegatsha inqunywe, bese iphathwa ngesulfure noma amalahle ukuphulukiswa okusheshayo.
Isitshalo sezindlu asikho iphunga elimnandi.
U-Pedilanthus uyisitshalo esingasetshenziswa isikhathi eside.
Ngokunakekela kahle, kuzokhula futhi kuthuthuke njalo ngonyaka.. Esikhathini somuthi omdala, phakathi neminyaka, ingxenye engezansi yamahlumela angase alahlekelwe umphumela wokuhlobisa ngenxa yokuvezwa.
UPedilanthus unakekela ekhaya:
Isitshalo sezindlu sikaPedilanthus:
U-Pedilanthus unesifo esithathelwanayo sokuzivikela.ukuvikela ngokumelene nezilokazane nezifo. Izinkinga zingacasulwa ngokunakekelwa okungalungile.
Inkinga evamile yile impande yokubola (isifo sofungal). Ihlanganiswe nokuphuza okungalungile, ngokweqile. Izifo ezinengqondo.
Uma kungatholakali ngokuhamba kwesikhathi, kungaholela ekufeni. Imbali idinga ukufakwa kabusha, ngaphambi kokuhlanza izimpande ngokubola, ukususa izingxenye ezimele kanye nenqubo kwisisombululo esibuthakathaka se-potassium permanganate.
Umhlabathi omusha nomthamo ngaphambi kokutshala kunconywa ukuba ungenwe yi-disinfected.
Uma lesi sitshalo sisegumbini elishisayo nomoya owomile kakhulu, ingahlaselwa yi-spider mite, aphid. Ukususa izinambuzane kuzosiza ukwelashwa ngamanzi asozini noma isisombululo se-actellic.
Ekuqothulweni i-whitefly amaqabunga aqala ukuphuzi futhi anamathele esikhunjeni sezandla uma ethintekile. Ukwelashwa ngama-insecticide kuphumelela kakhulu ngokumelene nenambuzane.
Ekuqothulweni i-mealyworm emaqeleni e-leaf and on stems, i-cotton-like fluff ivela, lesi sitshalo siyeka ukukhula. Kudingeka ukuthi ususe inkathazo nge-swab yekotini.
Uma ama-pedilanthus abeka amaqabunga mhlawumbe uyigcina emakhazeni abanda, ahlasele. Qaphela isimo sesitshalo.
Amafutha, izingxenye ezifile zidinga ukunqunywa. Endaweni yabo kuyoba khona amahlumela amasha.
Uma ukuwa kwekwephuzile noma ubusika kwaqala ukudonsa isiquUdinga ukunciphisa izinga lokushisa lomoya egumbini, qaphela ukukhanya.
Kungenzeka ukuthi imbali idinga ukukhanya okungaphezulu.
Uma imbali ayizange iqhakaze, qaphela ukunakekelwa ngesikhathi sokuphumula.
Ukuphuza nokumisa amaqabunga ihlobo libonisa ukungabi namanzi okuphuza.
Ungashiyi ibhodlela efasiteleni ngaphandle kokumnyama eshisayo, ukuvimbela ukushisa, ukushisa.
Izinzuzo kanye nokulimala kwe-pedilanthus:
Pedylanthus titimatidny ngokuvamile esetshenziselwa ukwelashwa ukukhiqizwa kwama-antimicrobial agents. Izakhamuzi zaseNingizimu Melika zisebenzisa njengesidakamizwa se-psychotropic.
Zonke izingxenye zesitshalo zinobuthi.. Uma uyayiphatha kudingeka uqaphele, sebenzisa amagilavu.
Umusi unobuthi futhi ubangele ukuvuvukala uma kuhlangana nomzimba wezandla noma amehlo.. Gcina imbali kude nezingane kanye nezilwane ezifuywayo.
Indlela yokuhlukanisa i-toadstool evelele
Izinhlobo ezidume kakhulu ze-yarrow